Abenzi base China iRipid Nucleic Acid Extraction Kit abavelisi kunye nabathengisi | Jianma
Ukulondolozwa kunye nokungasebenzi kweesampulu zentsholongwane (Uhlobo E), ukukhutshwa ngokukhawuleza kwee-acid ze-nucleic (iDNA / RNA) (Uhlobo S / Uhlobo E), imveliso eqhubekekayo inokusetyenziselwa ukuxilongwa kwezonyango kwi-IVD.
I-Nasopharyngeal swabs, i-alveolar lavage fluid, amanye amalaphu omzimba, njl.
Beka isampulu ye-swab kule reagent kwaye udibanise → Ukufudumeza kwi-95 ° C kangangemizuzu emi-3 → Iisampulu ezenziweyo zinokusetyenziswa njengeetemplate zokumisela inkqubo yokwandisa ngokuthe ngqo.
Ukukhawuleza: Umsebenzi uphela unokugqitywa ngemizuzu emi-5.
Ukhuseleko: Ukutshabalalisa ngokukhawuleza ukwakheka kwangaphandle kwintsholongwane, ukuphulukana namandla osulelo, kunye nokuwuthintela kakhulu umngcipheko wosulelo lwesibini, ukukhusela ukhuseleko lwabasebenzi bezonyango.
Elula: Akukho sidingo secentrifuge enkulu kunye nezinye izixhobo ezintsonkothileyo (Ezingelo-swab yegazi).
Ukulondolozwa: Ukukhuselwa okugqwesileyo kwi-RNA, kuthintela iimpazamo zokufumanisa ezibangelwa kukuthotywa kweRNA.
[Umba No.Kwaye Ukucaciswa]
Uhlobo lwe-S: Ukukhutshwa kwe-Acid yeNyukliya, 50T / ikiti
Uhlobo lwe-E: Isampulu yokuGcina okungasebenziyo kunye neNusic Acid Extraction, 50T / kit
Umzobo 2 I-pseudovirus esezantsi yoxinaniso kwisampulu ye-swab ekhutshwe yimveliso yenkampani ye-D, kunye neesampulu zeRNA zonakaliswe ngokupheleleyo.
Umzobo 4 Xa kuthelekiswa ne-reangen ye-Tiangen magnetic bead reagent, ixabiso le-Ct le-Jianma Gene ekhawulezayo ye-acidic kit yokutsala li-1 kuphela, kodwa ixesha lokukhutshwa lifutshane ngemizuzu engama-40.
Le reagent ekhupha i-acid ekhawulezayo inokuhlangabezana ngaxeshanye neemfuno zokuqokelelwa kwesampulu, ukungasebenzi kwintsholongwane, ukukhutshwa kweRNA, isampulu yokugcina ixesha elifutshane kunye nesampulu yokuhamba.Ingahanjiswa kubushushu begumbi nge-swab yomqala.
Egqithileyo I-SARS-CoV-2 Kit yeNyukliya yokuFumanisa iAcid
Okulandelayo: Ifektri yenze intengiso eshushu I-China Lab yeGradient PCR Isixhobo soMatshini weXabiso eliLungileyo kwiXabiso eliPhantsi
I-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Ukufumanisa isisombululo siphela
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Ikhithi yasimahla yokuSusa, Iikiti zeChina ezikhawulezayo zovavanyo, I-Canine Parvovirus (Cp), Ikhithi yokuKhupha iAcid Nucleic ekhawulezayo,